Barreessaan LibreOffice galmeewwan bu'uura lachan, kunis yaadannoowwan, faaksii, xalayaawwan uumuu sidandeesiissa, akkasuumas galmeewwan maki, galmeewwan kutaa hedduu dheeraa fi xaxaa, murqusaa guutuun, gabateewwan fi kaasawwan wabii dabalatee itti fufa.
Saxaaxuu fi Caasaa uumuu
Akkasuumas, galmeewwan barruu keessatti kasaawwan fi gabateewwan hedduu uumuu nidandeessa. Akkaataa barbaaddeen caasaa fi danaa kasaawwan fi gabateewwanii qindeessuu nidandeessa. Akkuuma sanaan akka barruucha keessaa maalimaawwan walgitanitti utaaluu dandeessuuf, geessituuwwanii fi toorbarruuwwan dhiisi.
Barreessaa LibreOffice waliin Maxxansa minjaalee
Barreessaan LibreOffice galmeewwan haalata kaamayaan uumuudhaaf akka sigargaaruuf, maxxansa minjaalee fi meeshaalee fakkasaa hedduu kunis broosharii, iftoomsaa, fi afeerraawwan of keessaa qaba. Galmeewwan keetii, goodayyaawwan barruu, saxaatoo, gabateewwan tarreewwan tarjaa-hedduun, akkasuumas wantaawwan kabiroon dhangeessuu nidandeessa.
Galmeewwanii barruu LibreOffice keessaa dalaga herregaa walqabatoo warra herrega walxaxaa fi kornyoowwan yaayaatiif sigargaaran qaba. Akka herrega hujjeechuu dandeessuuf, gabatee tokko galmee barruu keessatti salphaatti uumuu nidandeessa.
Meeshaan fakkasaa Barreessaa LibreOffice, galmeewwan barruu keessatti fakkasaa, saxaatoo, waayoowwan, akkasuumas fakkasaawwan ka biroo uumuu sidandeesiissa.
Galmee barruu keessatti, saxaatoo JPG yk GIF tiin dhangeefamee dabalatee, dhangiiwwan adda addaa waliin fakkaattiiwwan saaguu nidandeessa. Dhangiiwwanii baayee beekamoon galmee barruu keessaa kan gulaalamuu dandaa'an gulaalaa calaqqeetiini. Akkasuumas, Kuusfaayaan walitti qabaa saxaatoo muraa faayoowwan isaaniin qind'aanii laatta.Hojqoncoo Kusfaayaa miidhaa bocquu dibuu uuma.
Walqunnama Fayyadamaa Mijee
Amalootii harkisii kaa'i akka ati haala gaariin atatamaan galmeewwan barruu LibreOffice keessaa waliin hojeechuu sidandeessisa. Fakkeenyaaf, wantaawwan, kunis saxaatoo kuusfaayaa irra, galmeedhuuma tokko keessaa bakka tokko irraa gara birootti, galmeewwan LibreOffice gidduutti harkistee kaa'uu sidandeessisa.
fayyadamaawwan LibreOffice tiif Sirna Gargarsaa akka wabii guutuutti, dalagaalee salphaa fi xaxaadhaaf, ajajoota dabalatee fayyadamuu nidandeessa.
Title is: Amaloota Barreessaa $[officename]